Priselọ ọrụDB nnweta nke 2ndQuadrant nwere ike ịbụ ihe ize ndụ nye obodo | Site na Linux
EnterpriseDB, ụlọ ọrụ nkeonwe dabere na Massachusetts onye na-enye ngwanrọ na ọrụ dabere na nchekwa data PostgreSQL free na oghe isi, enwetara 2ndQurant, ụlọ ọrụ Postgres zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ ihe ngwọta.
Nke a kwuru, dị ka a blog post site Bruce Momjian, nnweta a N'ezie, ọ bụ ozi ọma maka ụlọ ọrụ ndị a ọ nwere ike ịbawanye ohere maka obodo PostgreSQL.
Na post gị, ekewa ndị a dị egwu na atọ edemede dị ka ndị a.
Bruce Momjian nọ na-arụ ọrụ na PostgreSQL kemgbe 1996. Ọ bụ onye nchoputa na akụkụ nke isi otu ndị otu PostgreSQL mmepe ma bụrụ onye ọrụ nke EDB kemgbe 2006, nke nwetara 2ndQuadrant na nso nso a.
Dabere na EDB, nchekwa data ahụ na-enweta ewu ewu na mkpa maka azụmaahịa. Dabere na EDB's Ed Boyajian, ọchịchọ a kara ngwa ngwa n'ihi na teknụzụ enwegoro nke ọma na iri afọ ndị na-adịbeghị anya.
“M ka na-akpọtụrụ ndị ahịa anyị ma na nso nso a ha ekwuola na ha na-enwe mmetụta nke nrụgide miri emi na ogologo oge nke Covid-19. Nrụgide ndị a na-eme ka agụụ ha nwere maka isi mmalite na mkpebi ha siri ike pụọ na iwu mmachi, ogige ndị nwere mgbidi, ụlọ ọrụ, na igwe ojii na-egbochi ha. Nsogbu akụ na ụba nke Postgres na-akpali ha ịgbanwe atụmatụ ha. Ha na-agwa m na ha chọrọ nchekwa data na ndị ọkachamara Postgres nwere ike inyere ha aka igbo mkpa ha ugbu a na ọdịnihu, ”ka o kwuru.
Na nkenke, Dabere na Ed, ndị ahịa EDB bụ ikike na-akpali akpali n'azụ nnweta a.
Ọzọkwa, EDB nwere obi ụtọ na ya na 2ndQuadrant na Postgres na-arụ ọrụ maka ahịa ma ọnụ ha ga-akwagide Postgres n'ihu na mpaghara dịka mmegharị, nkwado ndabere na mgbake ọdachi, ntinye igwe ojii ngwakọ, Kubernetes nnweta dị elu, na nchịkọta.
EDB kwenyere na nke a ga - eme ka ha nwee ike inye ndị ọkachamara kachasị na ndị ọkachamara na ndị ọkachamara nkwado, yana njikọta nke nkà ndị ọ na - enweghị ndị ọzọ na - ere ahịa.
Otú ọ dị, ọbụghị mmadụ niile na-ahụ ya otu ahụ dị ka Bruce Momjian, onye kwenyere na ọ bụ ezie na nnweta a bụ ozi ọma maka ụlọ ọrụ abụọ ahụ, ọ nwere ike imerụ obodo nchekwa data ma ọ bụ gbochie mmepe ya.
Nke mbụ, cheta enwere iwu edeghi nke gini Otu ndị tozuru etozu Postgres ekwesịghị inwe ihe karịrị ọkara ndị otu ya n'ime otu ụlọ ọrụ.
Mana nnweta nke 2ndQuadrant site n'aka EDB na-aga n'ụzọ a. N'ịbụ onye otu n'ime ndị otu PostgreSQL, nke nwere ndị otu 5, nnweta ahụ na-eweta nnọchite anya EDB na ndị otu PostgreSQL na 60%. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, EDB nwere ndị 3 ugbu a na otu ahụ.
Na Momjian kwuru na ndị isi na-arụ ọrụ iji chọta ihe ngwọta maka nsogbu a ngwa ngwa. Mgbe ahụ, o kwuru na eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ abụọ a n'otu n'otu na-ebelata nhọrọ nke ndị ọrụ Postgres maka nkwado na ọrụ, ọkachasị na ahịa ndị North America na Western Europe.
Ka ọ dịgodị, Momjian kwukwara na ebe ọ bụ na obodo Postgres na-agbanwe ihe n'ụzọ nọọrọ onwe ya, nnweta ahụ nwere ike ọ gaghị abụ nsogbu maka ngwanrọ obodo, mana maka ngwaọrụ ụlọ ọrụ Postgres na-achịkwa.
N'ikpeazụ o kwuru na enwere ihe egwu na ụlọ ọrụ buru ibu karị ga-achọ imerụ Postgres nwere ike nweta EDB ma duzie ya na ntụpọ na-anọpụ iche ma ọ bụ na-adịghị mma maka obodo Postgres. Nkwekorita na-asọmpi n'etiti ndị ọrụ na enweghị ụlọ ọrụ nkwado Postgres ndị ọzọ nwere ike ime ka ogologo oge nke mmetụta ndị a dịkwuo oke.
Na mmechi, Momjian kwuru na ọ nwere obere ma ọ bụ ihe ọ bụla obodo nwere ike ịme ma ọ bụ nwee ike ime iji belata nsogbu ndị ama ha aghaghi ima nsogbu.
Na nzaghachi nye Momjian, ụfọdụ kwuru na nnweta a enweghị ike ịgbanwe mpaghara ndị na-ere ahịa ebe enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye nkwado teknụzụ, ndụmọdụ na ọrụ maka Postgres.
Na Europe, ha na-enye ọtụtụ ndị ọzọ, gụnyere Dalibo, Cybertec na Postgres Professional. Na United States, na mpụga EDB, enwere Crunchy Data na PGExperts.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Nweta nnabata abuo nke EnterpriseDB nwere ike buru nsogbu nye obodo